CNC umzila Atc Wooden Door zefanitshala Iikhabhathi Woodworking nangokukrola Machine - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
Inkqubo yebhodi yomsinga oqinileyo, umnyango wekhabhathi, umnyango wokhuni, umnyango weplanga, umnyango ongenapeyinti, thintela umoya, inkqubo yefestile yobugcisa, umatshini wokucoca izihlangu, ikhabhathi yomatshini wokudlala kunye nebhodi, itafile ye-mahjong, itafile yekhompyuter, kunye nezinye izinto ezingezizo zesinyithi kunye nesinyithi.
3 Axis 1325 iinkuni cnc umzila kumatshini ngentlabo ekwenziweni kwefanitshala
Umzi mveliso wokhuni: I-CNC router ingasetyenziselwa ifanitshala yeplanga eqinileyo, ifanitshala ye-mahogany, iingcango zepeyinti ze-MDF, iingcango zomthi eziqinileyo, iingcango ezihlanganisiweyo, iingcango zekhabhathi kunye neefestile, ecaleni kweekhabhathi, ukusonga isikrini njl.
Icandelo lentengiso: i-CNC umzila unokukrola zonke iintlobo zemiqondiso, iimveliso zelogo, iimpawu zorhwebo, iipleyiti zamagama, iibheji, isipho sokuhombisa, kwi-emboss
Iimbasa, izatifikethi, izinto zezikhumbuzo, iifreyimu zeefoto, umhombiso wefanitshala, iipleyiti zePVC, iibhodi zePCB (ukubhola nokukrola), iibhodi zombala ophindwe kabini, iacrylic njl
Umsebenzi wobugcisa: Emthi, kuqalo, kwibhodi ephilayo, kumbala ophindwe kabini, ngekristale kunye nezinye izinto ezahlukeneyo zeepateni ezintle kunye nokukrolwa kombhalo.
Uqwalaselo oluphezulu lwe-6060 ATC Mold Aluminium yokukrola umatshini we-CNC Router
Kufanelekile ukuba nokukrola, ukugaya kunye nokubhola ngokuhlangeneyo zonke iintlobo zezinto
ezifana nentsimbi, ubhedu, i-aluminium kunye neeplastiki.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kwizithuthi, ukungunda kwenaliti, ukubumba kwentsimbi kunye nokukrola amashishini okubumba.
Ngokukodwa yenzelwe nokukrola kunye nokugaya izinto zokubumba, iiglasi zewotshi, iwotshi, iphaneli, ibheji, uphawu, imizobo kunye namagama ombini-ntathu nangaphandle kobuso bendawo obukhulu obukhulu.
Umatshini we-CNC wokujika umatshini ozenzekelayo weLathe
Umthi wokhuni sisixhobo esinokudala izinto ezinje ngezitepsi, uyilo kumthi, nangaphezulu.
I-lathe yeplanga ye-CNC iqhutywa yiphaneli elawulwa ngumsebenzisi.
Umatshini we-Lathe wenzelwe i-cylindrical okanye i-conoid workpieces, umzekelo, intsika, isibhengezo, imilenze yesihlalo, njl.
Zonke izixhobo zisebenza ngendlela efanayo.Ukufikelela kwisixhobo se-USB, ukujika i-garland, i-axing axing axis, iincakuba ezimbini, iziqwenga ezi-2.
Ukuveliswa kwempahla yendlu eqinileyo, izitepsi zomthi eziqinileyo, iikholamu zomthi, iiplanga zomgangatho oqinileyo, izinto zokuhombisa zokhuni, ubugcisa beemithi,
ezifana ujikelezisa iziqwenga zokusebenza machining. Isebenza kwifenitshala, izinyuko, ukuhombisa, imveliso yezandla eyenziwe ngomthi, njl.
Iimveliso zokugqibela zibandakanya iziqwenga zomsebenzi ojikelezayo, isitya esimile, ubume beetyhubhu kunye nobugcisa bezithuthi, njengekholamu yezinyuko, ikholamu yamaRoma, ikholamu ngokubanzi, iitafile okanye izitulo zemilenze, isitya sokuhlambela, ivazi yomthi, itafile yeplanga, ibaseball, ifanitshala yemoto ikholamu yebhedi yabantwana, njl.
I-Jinan Intengiso ngokuzenzekelayo i-CNC Metal Cutter i-Plasma Flame Cutting Machine
Ukusetyenziswa ngokubanzi kumashishini njenge-aerospace, oomatshini bezolimo, oomatshini bokwakha, ukuvelisa oololiwe, ilifti yokuvelisa, isithuthi sokwakha esikhethekileyo, isixhobo sokuvelisa, ukuvelisa oomatshini beoyile, oomatshini bokutya, ukuthengisa okuhonjisiweyo, inkonzo yokuqhubekeka kwamanye amazwe nazo zonke iintlobo zamashishini ezinxulumene nokwenza umatshini.
Isinyithi, i-aluminium, iphepha elibunjiweyo, iphepha elimhlophe, ipleyiti yetitanium kunye nezinye iipleyiti zesinyithi.
Iqhubekekisa amaqokobhe oomatshini kunye neemveliso ze-elektroniki, iimpawu zentengiso, ubugcisa, igadi yentsimbi, ukwenziwa kweemoto, ukwakha isikhephe, izixhobo zombane, ukusika ibhodi.
Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini we-Metal / i-Stainless / Copper / Aluminium
Ifayibha i-Laser Cutting Equipment ilungele ukusikwa kwesinyithi kunye nePhepha leSinyithi, i-Plate ye-Steel Sheet, i-Carbon Steel Sheet, i-Alloy Steel Plate, i-Spring Steel Sheet, i-Iron Plate, i-Iron, i-Galvanized Sheet, i-Aluminium Plate, i-Copper Sheet, i-Brass Sheet, i-Bronze Plate Ipleyiti yeGolide, iPlate yeSilivere, iPlate yeTitanium, i-Metal Sheet, i-Metal Plate, iityhubhu kunye nemibhobho, njl.
I-Fibre Laser Cutting Machines isetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni iBhodi yeBhodi, ukuthengisa, imiqondiso, imiqondiso, iileta zensimbi, iileta ze-LED, iKhitshi yokuGcina, iiNcwadi zeNtengiso, iiSetet Metal Processing, iiMetical Components kunye neeNxalenye, i-Ironware, iChassis, iiRacks kunye neeCabinets eziqhubayo, i-Metal Crafts, Isinyithi sobugcisa bentsimbi, i-Elevator yePaneli yokuSika, iiHardware, iiNxalenye eziZenzekelayo, isakhelo seGlasi, iiNxalenye ze-Elektroniki, iiPlate zegama, njl.